Kuchengeta DNI-mhando magwaro emunhu muApple Wallet kunononoka kusvika 2022 | IPhone nhau
Kuchengeta magwaro emunhu akadai seDNI muApple Wallet kunononoka kusvika 2022
Rimwe remabasa rakaziviswa muna Chikumi apfuura paWWDC yegore rino raive rekukwanisa kuchengeta zvinyorwa zvemunhu zvakaongororwa muApple Wallet application. Kukwanisa kuchengeta iyo DNI kana yakafanana muWallet yaive imwe yesarudzo dzataigona kuita nebasa idzva iri rakaziviswa nemutevedzeri wemutungamiri weApple Pay, Jennifer Bailey.
Nenzira iyi, vazhinji vedu takafunga panguva yekuratidzwa kuti izvi zvaive zvakanaka nekusatakura zvinyorwa asi izvo. zvaizoenderana nemasangano ehurumende kuti akwanise kuzviita Munyika dzose. Zvakanaka, zvinoita sekunge Apple haisi kuzovhura iyi sarudzo muna 2021 zvichienderana neyakakurumbira svikiro 9To5Mac.
Gwaro rekuzivikanwa remagetsi muWallet rinotora nguva kuita
Kamwe Apple yakawedzera basa iri muWallet, mushandisi anozokwanisa kuongorora uye kuchengeta zvitupa zvake muapp. Izvi, zvinonzwika zvakanaka kune vazhinji vedu, zvichatora nguva kuita kunyangwe iyo Cupertino femu pachayo ichitanga nhasi sezvo ichifanirwa kusimbiswa nemasangano ehurumende yenyika imwe neimwe uye. izvi zvinogona kutora nguva yakati rebei kuita.
Mune ino kesi tinoverenga shanduko yezuva rekuburitsa zvakananga pawebhusaiti yeApple, panzvimbo chaipo panoonekwa iOS 15 chimiro chekutarisa.Ikoko iko zvino kunoratidza mushure mekuchinja uku kuti chimiro chichasvika zviri pamutemo "kutanga kwa2022". Sezvinowanzoitika muzviitiko izvi Apple haina kupa ruzivo rwakananga nezvezuva, ichavhura imwe nguva gore rinouya nekuvandudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » Kuchengeta magwaro emunhu akadai seDNI muApple Wallet kunononoka kusvika 2022
WhatsApp inotangisa chigadziri chinenamirwa muwebhu vhezheni yayo
Black Friday inopa pane zvigadzirwa zveApple nhasi Mbudzi 24